Aabayaasha Da’da Ah Oo Dhala Carruur Garraad Sare Leh (akhriso)….. | Balanbaalis.Com	Aabayaasha Da’da Ah Oo Dhala Carruur Garraad Sare Leh (akhriso)….. – Balanbaalis.Com
Daraasad cusub oo soo baxday ayaa lagu sheegay in aabayaasha da’da weyn ay dhalaan caruur ka caqli badan kuwa ay dhalaan aabayaasha da’da yar, daraasaddan ayaa lagu ogaaday in caruurta ay dhalaan aabayaasha da’da weyn uu culeysku ku yaryhay iyo cudurada dhanka nafsiga ah.
Cilmibaarisyo hore loo sameeyay ayaa tilmaamayay in caruurta ay dhalaan aabayaasha da’d weyn ay u nugul yihiin cudurada qaar sida; Autism-ka iyo schizophrenia, laakiin daraasaddan cusub ayaa sheegaysaa in caruurtan ay leeyihiin meelo ay kaga sarreeyaan asaagood oo ah aqoonta iyo shaqada.
Cilmibaarayaal ka tirasan King’s College London ee UK iyo iskuulka caafimaadka ee Ikan ee ku yaalla dalka Mareykanka, ayaa waxay ay isla eegeen shaxda dhaqanka iyo aqoonta 15 kun oo caruur ah, iyadoo caruggu jira 12 sanno laga qaaday imtixaan dhanka internetka ah oo lagu qiyaasayo garaadkiisa aqooneed, waxyaabaha uu xiiseeyo iyo dad la dhaqankiisa. Iyadoo macluumaadkaa adeegsanaya ayaa waxay qiyaas ku sameeyeen heer IQ ee carug kasta xilliga waxbarashada.
Cilmibaaristan oo lagu faafiyay joonraalka caafimaadka ee “Translational Psychiatry”, ayaa waxaa lagu ogaaday in caruurta ay dhaleen aabayaasha da’da weyn ay ka badan yihiin dhanka IQ ardayda kale ee ay dhaleen aabayaasha ka da’da yar.
Sidaas oo kale caruurta ay dhaleen aabayaasha da’da weyn ayaa la ogaaday iney kuwa kale kaga sarreeyaan dhanka “Xisaabta, Sayniska, Tiknoloojiyadda, iyo Engineerinka”.
Si kastaba, cilmibaaristan ayaa ah mid dhiirigelinaysa dadka doonaya iney xilliyo dambe caruur dhalaan, kadib marka ay gaaraan yoolkooda nolosha.